Madaxweynaha Kenya oo la filaayo in uu yimaado Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Kenya oo la filaayo in uu yimaado Muqdisho
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa in uu yimaado Magaalada Muqdisho ee xarunta Somaliya,waxaana la filayaa in uu ka qeyb noqdo madaxda ka qeyb galeysa Caleema saarka Madaxweyne Farmaajo oo dhaceysa 22-ka Bishan.
Mr Kenyatta, ayaa waxa uu Khamiistii bartiisa Facebook soo dhigay in dhambaal uu soo gaarsiiyay Wasiirka arrimaha dibadda Somaliya C/salan Hadliye Cumar,dhambalkaasi oo uu ka helay Madaxweynaha cusub ee Somaliya.
Mr Kenyatta ma uusan sheegin waxa ku qornaa dhambaalka uu ka helay Farmaajo,waxaase wararka sheegayaan in dhambaalkaasi uu ku qornaa casuumada xaflada caleemo saarka Madaxweynaha cusub.
Dadka Kenya ayaa hadal haya in 5-bilood gudahood booqashadii 2-aad uu Uhuru ku tagayo Somaliya miyuu ka laaban doonaa Somaliya isaga oo aan la kulmin ciidanka Kenya ee ku jira Amisom.
Booqashadii September ayey dadka Kenya ka filayeen Kenyatta in uu Askarta niyadda u dhiso oo uu ku booqdo halka ay joogaan laakiin ma dhicin,waxaana hadda la hadal hayaa go’aanka uu qaadan karo maadaama tii hore lagu dhaliilay.
Madaxweynaha Uganda Yuweri Mosevin oo ka mid ahaa madaxdii September ka qeyb gashay Shir Madaxeedkii IGAD ee Muqdisho ka dhacay ayaa habeen ku bixiyay booqashada Askartiisa joogta Somaliya,taas oo ay ka maseereen Shacabka Kenya.
Bixinta mushaaraadka ciidanka oo ka bilaabatay magaalada muqdisho
Shabaab oo xukun gacan goyn ah ku fuliyay wiil dhalinyaro ah